Tafiotram-Pasika Nanempotra Namely An’i Iran · Global Voices teny Malagasy
Tafiotram-Pasika Nanempotra Namely An'i Iran
Voadika ny 19 Febroary 2015 17:31 GMT
Nivoaka voalohany tao amin'ny Arseh Sevom ity lahatsoratra ity ary naverina navoaka eto noho ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, lasa olana goavana ho an'ny tontolo iainana ireo tafiotram-pasika any andrefana sy atsimon'i Iran, loza mananontanona ho an'ny fahasalamana sy ny fiadanan'ny olona an-tapitrisa ao Iran sy ny faritra manodidina.
Nampiasain'ny mponina ny tenifototra #KhuzestanCantBreathe (tsyafamiainaiKhuzestan) mba hisarihana ny saina ho amin'ilay olana. Faritany ao Iran misy an'i Ahwaz i Khuzestan : ilay tanàna maloto indrindra eto an-tany. Ny topimaso atao amin'ny sarintany manome valiny eo noho eo momba ny rivotra manerana ny tany dia mampiseho rivotra avy any atsimo atsinanan'i Iran miainga avy aminà faritra samihafa ka tafiditra ao anatin'izany i Iràka, Arabia Saodita, ary Afrika avaratra atsinanana.
Vao haingana ny Foolad FC, tarika mpanao “soccer” ao Ahwaz, no nibitsika sarin'ireo mpilalao ao anaty rivotra maloto :
اینجا #اهواز است #KhuzestanCantBreathe pic.twitter.com/Kn6DWIJbuc
ity i #Ahwaz #KhuzestanCantBreathe
Iraika ambinifolo ireo ONG nanoratra ho an'ny manampahefana ao amin'ny Firenena Mikambana mba hanasongadina ireo olana any atsimo andrefan'i Iran, mangataka azy ireo mba hanao tsindry amin'ny governemanta hiatrika ny krizy. Azo vakiana eto.ilay taratasin-dry zareo.
Tafatafa niarahana tamin'i Sam Khosravi
Tafiotram-pasika natevina no nanamatroka ny lanitra sy nandrakotra ny tany tao amin'ireo tanàna toa an'i Ahwaz any atsimo andrefan'i Iran. Nandray anjara tamin'ny fampidirana an'i Ahwaz ho ny tanàna maloto indrindra eto an-tany ireny tafiotra ireny.
Nanontanian'i Arseh Sevom i Sam Khosravi, mpikaroka momba ny tontolo iainana, mba haneho hevitra momba izay niandohan'ireny tafiotram-pasika ireny sy ny haavon'ny fahalotoana. Fanontaniana maro no napetrakay taminy. Mitaty ny vokatry ny firoboroboan'ny fandotoana indostrialy ve i Khuzestan , toa an'i Tehran? Naninona no lasa nitombo ny fotoana itrangan'izy ireny sy ny hamafiny tato anatin'ny taona vitsivitsy?
Inona no azonao ambara anay momba ny niavian'ireny tafiotram-pasika sy vovoka ireny?
Amin'ny ankapobeny, ny tafiotram-bovoka dia mety ateraky ny karazan-javatra isan-karazany, na io indostrialy,na voajanahary. Ny tatitra amin'izao fotona izao momba ny zavatra mitranga eto Iran dia mampiseho fa ity tafiotram-pasika nisy tampoka ity dia tsy avy amin'ny resaka indostrialy.
Tsy maintsy misy loharanony ireny tafiotram-pasika ireny.
Loharano telo mitambatra hatreto no miteraka an'io loza voajanahary sy voatrolombelona mitambatra io. Ny sary avy amin'ny zanabolana dia mampiseho fa nitàna toerana betsaka i Syria sy Iràka nandritry ny fotoana elaela. Loharano iray hafa miteraka ireny tafiotram-pasika sy vovoka ireny koa ireo tany efitra ao Afrika Avaratra. Asehon'ireo fandalinana natao tao amin'ny Anjerimanontolon'i Tehran fa miteraka ireny tafiotra ireny ihany koa ny fahasimban'ny faritra mando. Mba hahafantarana tsara ny antony tena miteraka azy ireny dia ilaintsika ny manao fikarohana mahaleotena misimisy kokoa.
Tsy vaovao aty amin'ny faritra ny tafiotram-pasika. Fa maninona ireo niseho tato ho ato no tena niteraka toe-draharaha henjana ho an'ny olona sy ny faritra?
Ny fahasimban'ny loharano sy ny fanjavonan'ireo sàkana voajanahary ampian'ny fiovàn'ny rivotra iainana no namadika irey tafiotra ireny ho ratsy kokoa. Raha ny modely hafa aza dia mbola maminavina tafiotra misimisy kokoa amin'ny hoavy (tsy ho ela).
Ahoana no hamahàna io olan'ny tontolo iainana io?
Fotoana efa ela no nananantska ireny karazana tafiotra ireny, saino ny rivotra “Nashi” any amin'ny ampahany atsimo amin'ny firenena, ohatra. Ny olana dia, raha ampitahaina amin'ny fahiny, nitombo ny hamàfiny sy ny fahatetehan'ireny tafiotra ireny.
Tsy misy ny vahaolana anaty fotoana fohy. Tsy hoe tao anaty alina iray no niforona ilay olana ka ho ao anaty alina iray koa no hamahàna azy, mila mieritreritra momba ny fahasalaman'ny mponina aty amin'ny faritra isika, ary manome azy ireo ny fitaovana hanalefahana ny fiantraikan'ny tafiotra. Tokony ahena ny ora iasana any anatin'ireo fikambanana tohanan'ny fanjakàna, ireo vondrona mpanao vonjitaitra tokony havitrika any amin'ireo faritra samihafa, ary tokony hampiasa fitaovana fitsofana rivotra any an-tokantrano.
Somary mbola sarotra ny vahaolana mandritry ny fotoana maharitra. Handany fotoana sy volabe izy ireny. Raha ny fahitàna ny teo-draharaha amin'izao fotoana izao any Afovoany Atsinanana, indrindra fa ao Syria, Iraka ary Iran, toa tsy hisy na inona na inona ho atao.
Mila manao ezaka matotra mba hamelomana indray ny fifamenoan'ny tontolo iainana. Sarotra, kanefa heveriko fa afaka atao.
Nadika avy amin'ny teny Persiana: http://www.arsehsevom.net/fa/tofan-rizgardha-masoliat-motaghabele-dolat-melat/